Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Airlines » ITA Airways webatara iwu maka ụgbọ elu Airbus 28 ọhụrụ
Airlines • Airport • Aviation • Na -agbasa Akụkọ Europe • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • investments • Akwụkwọ akụkọ Italy • News • ndị mmadụ • Tourism • Transportation • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem
ITA Airways na-akwado maka ụgbọ elu 28 Airbus
Ụgbọ elu Airbus ọhụrụ a ga-amụba ụgbọ elu mbụ nke ITA Airways na ụgbọ elu ọgbọ ọhụrụ nwere arụmọrụ gburugburu ebe obibi ka mma, nke nwere teknụzụ kachasị ọhụrụ na ụlọ ọgbara ọhụrụ iji kwe nkwa arụmọrụ kachasị maka ụgbọ elu na nkasi obi kacha mma nye ndị njem.
Ụlọ ọrụ ITA Airways, Italy ọhụrụ mba ụgbọelu, eguzobewo iwu na Airbus maka 28 ugbo elu, gụnyere asaa A220s, 11 A320neos na 10 A330neos, ọhụrụ version nke kasị ewu ewu A330 widebody airliner. Usoro ahụ na-akwado Memorandum of Understanding mara ọkwa na 30th September 2021. Tụkwasị na nke ahụ, ụgbọ elu ahụ ga-agbaso atụmatụ ya ịgbazite A350s iji mejupụta nhazi ụgbọ elu ya.
"Taa stratejik mmekọrịta na Airbus na-ewere nzọụkwụ dị mkpa n'ihu na mmechi nke iwu anyị kwuputara na Septemba gara aga. Na mgbakwunye na nkwekọrịta a, ohere maka inwekwu mmekorita apụtala, karịsịa gbasara mmepe teknụzụ na mpaghara ụgbọ elu na dijitalụ, ebe Airbus bụ onye isi ahịa. Ihe ndị a niile bụ akụkụ nke omume iji nweta ebumnobi nkwado gburugburu ebe obibi anyị, "Alfredo Altavilla, Onye isi oche nke ụlọ ọrụ kwuru. Ụlọ ọrụ ITA Airways.
"Obi dị anyị ụtọ na anyị na ITA Airways na-arụkọ ọrụ iji wuo ọdịnihu ya ogologo oge site na teknụzụ kacha arụ ọrụ nke ọma Airbus ugbo elu. Nkwekọrịta a na-akwado Ụlọ ọrụ ITA Airways ebumnobi azụmaahịa iji zụlite netwọkụ ya na Europe na mba ụwa n'ụzọ kachasị adịgide adịgide, ”ka Christian Scherer, Onye isi azụmaahịa na Airbus kwuru. Airbus International.
Ụgbọ elu Airbus ọhụrụ a ga-agbasa nke mbụ Ụlọ ọrụ ITA Airways Flet nwere ụgbọ elu ọgbọ ọhụrụ nwere arụmọrụ gburugburu ebe obibi ka mma, nke nwere teknụzụ kachasị ọhụrụ na ụlọ ọgbara ọhụrụ na-ekwe nkwa ịrụ ọrụ kacha mma maka ụgbọ elu yana nkasi obi kacha mma nye ndị njem.
A220 bụ naanị ebumnuche ụgbọ elu arụpụtara maka ahịa oche 100-150 wee na-achịkọta ikuku ikuku ọgbara ọhụrụ, ihe ndị dị elu yana injin turbofan nke Pratt & Whitney nwere ọgbara ọhụrụ. N'ihe ruru 3,450 nm (6,390 km), A220 na-enye ndị ụgbọ elu agbakwunyere mgbanwe ọrụ. A220 na-enye ihe ruru 25% ọkụ ọkụ dị ala na ikuku CO2 kwa oche ma e jiri ya tụnyere ụgbọ elu ọgbọ gara aga, yana 50% ikuku NOx dị ala karịa ụkpụrụ ụlọ ọrụ. Na mgbakwunye, ụda mkpọtụ ụgbọ elu na-ebelata 50% ma e jiri ya tụnyere ụgbọ elu ọgbọ gara aga - na-eme ka A220 bụrụ ezigbo onye agbata obi gburugburu ọdụ ụgbọ elu.
Ezinụlọ A320neo bụ ezinụlọ ụgbọ elu kacha nwee ihe ịga nke ọma ma gosipụta ọnụego ntụkwasị obi arụmọrụ 99,7%. A320neo na-enye ndị na-arụ ọrụ na mbelata 20% na oriri mmanụ na ikuku CO2 - Ezinụlọ A320neo na-ejikọta teknụzụ kachasị ọhụrụ gụnyere engines ọgbọ ọhụrụ na ngwaọrụ Sharklet nku. Ezinụlọ Airbus 'A320neo na-enye nkasi obi na-enweghị atụ na klaasị niile yana oche obosara inch iri na asatọ nke Airbus na akụnụba dịka ọkọlọtọ.
The Airbus A330neo bụ ezi ụgbọ elu ọgbọ ọhụrụ, na-ewu na atụmatụ ewu ewu maka ezinụlọ A330 na mepụtara maka ọhụrụ technology A350. N'ịbụ onye nwere ọnụ ụlọ ikuku na-adọrọ adọrọ, A330neo na-enye ahụmahụ njem pụrụ iche na usoro ntụrụndụ ọgbara ọhụrụ na njikọta. Kwadoro site na igwe igwe Rolls-Royce Trent 7000 kachasị ọhụrụ, na-egosipụta nku ọhụrụ nwere ogologo oge yana winglets sitere n'ike mmụọ nsọ A350, A330neo na-enyekwa ọkwa arụmọrụ na-enwetụbeghị ụdị ya - yana ọkụ ọkụ 25% dị ala maka oche karịa ndị asọmpi ọgbọ gara aga. N'ihi ikike nke ahaziri n'etiti ya na ụdị dịgasị iche iche ya dị mma, A330neo a na-ahụta dị ka ụgbọ elu kacha mma iji kwado ndị na-arụ ọrụ na mgbake post-COVID-19 ha.